पुस्तक चर्चा: राजनीति, साहित्य र जीवनको त्रिवेणी
-सीताराम ढकाल प्रा. पीताम्बर शर्मा दाहालद्वारा लिखित कृति ‘मेरो रिमरिमे सम्झना’ चर्चा गर्न योग्य देखिन्छ । प्रस्तुत पुस्तकमा दाहालको बाल्यकाल र जन्मस्थलको चर्चा गरिएको छ । पिताजी भानुभक्त दाहाल र
-मोहन दुवाल निरन्तर यात्रामा कुदिरहन गाह्रो तर कुदिरहन सके एउटा सुन्दर विम्बचाहिँ बन्दो रहेछ । इतिहास खोजिरहने प्रमाण–प्रमेय कता छ नियालिरहने इतिहासकार नयराज पन्तले आफ्ना दुबै छोरा महेशराज र दिनेशराजलाई
काठमाडौं । नेपाली साहित्य श्रीवृद्धिको कार्यमा ‘सहयात्री दर्पण नेपाल’ कोसेढुंगा साबित हुने धारणा सामान्य प्रशासन तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितले राख्नुभएको छ । राजधानीमा हालै आयोजित एक कार्यक्रमा मन्त्री पण्डितले
-किरण श्रेष्ठ सविता श्रेष्ठ ‘बेहोसी’ धरानबाट उदय भएकी कवि हुन् । कवितामा मन दिन सफल यिनै कविले भर्खरै मात्र काठमाडौंमा ‘सेतो स्कार्फ’ कथासङ्ग्रह विमोचित गराए । यिनको पहिलोचोटि प्रकाशित कथासङ्ग्रह
व्यक्तिवृत्त -मोहन दुवाल संखुवासभाको वानाबाट वि.सं. २०१४ देखि विराटनगरमा बसोबास गर्दै आएका कोशराज रेग्मीले जीवनका अधिकांश क्षणहरु साहित्य साधनामा, पत्रकारितामा र समाजसेवामा बिताएको देखिन्छ । अझ साँच्चिकै उनको मूल्यांकन गरिँदा
-मोहन दुवाल कवयित्री तथा लोकगीत गायिकाका रूपमा ख्यातिप्राप्त हरिदेवी कोइराला गण्डकीमा मात्र नभई समग्र नेपालभरिकै लोकप्रिय गायिका हुन् । यिनका गीतहरू कर्णप्रिय छन् । कविताहरू मानवीय संवेदनाले व्याप्त छन् ।
पुस्तक चर्चा: उज्यालो छर्न आतुर कवि उप्रेती
-शरद श्रेष्ठ भीष्म उप्रेती सरल भाषा–शैलीमा कविता कोर्न सिपालु छन् । उनका काव्य–शैलीमा मीठासपन हुनुका साथै लोभ लाग्दा कविताका लागि कोरिएका अक्षर–विम्बहरु हुन्छन् । कवितामा जीवन हुनु र कविता सबैले
दुवाललाई ‘फेदोल उत्कृष्ट सिर्जना पुरस्कार’
काठमाडौं । फेमकुमारी–डोरनाथ ढुङ्गेल साहित्य प्रतिष्ठानले २०७४ सालको ‘फेदोल उत्कृष्ट सिर्जना पुरस्कार’ वरिष्ठ साधक तथा जनमत साहित्यिक मासिकका प्रधानसम्पादक मोहन दुवाललाई प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । असार २२ गते
शान्तिको गहन गजल संग्रह
-ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी साहित्यकार शान्ति शर्माको पहिलो साहित्यिक कृति ‘अम्लान फूल’ बजारमा आएको छ । मर्मस्पर्शी भावहरु समेटिएको यस गजल संग्रह अम्लान फूलभित्र ६० वटा गजल समावेश गरिएका छन् ।
-किरण श्रेष्ठ विगत चार दशकदेखि साहित्यिक फाँटमा राष्ट्रमा आफूलाई देखाउँदै आएका देविका तिमिल्सिना कथा विधामा सक्रिय रहँदै आएका कथाकार हुन् । कथालेखनमा मात्र नभई यिनी कविता, निबन्ध, संस्मरण आदि विधामा
संस्मरण: प्रगतिवादी साहित्यकार अग्निशिखा
-मोहन दुवाल शुकदेव नेपालसँग मेरो परिचय भएको पनि धेरै भयो । शायद २०३२ सालतिर हो उनीसँग मेरो सम्पर्क भएको । म चपलीस्थित गणेश निमाविका शिक्षक, उनी शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारी ।
राजमार्ग हो जिन्दगी राजमार्ग हो जिन्दगी खर्बाैं किलोमिटररुपी अपरिचित राजमार्ग हो जिन्दगी न शुरुवातको ठेगान, न अन्त्यको पहिचान कस्को कोखमा जन्मिने हो, कस्कोमा मरण हुने हो सधै साथ हुदा पनि
भोजपुरी र नेपाली भाषाका सर्जक गोपाल अश्क
व्यक्तिवृत्त — मोहन दुवाल भोजपुरी भाषामा साहित्यका बिम्बहरू कोर्दै आएका सिद्धहस्त लेखक गोपाल अश्कले हिन्दी र नेपालीमा पनि तीखो कलममार्फत् आफ्नो साहित्यिक व्यक्तित्व देखाउन सफल छन् । गोपालप्रसाद सर्राफबाट गोपाल
‘ऋतु फेरिँदै जान्छ’ को सन्दर्भमा कथाकार सरित्
पुस्तक टिप्पणी -दीपक भुजेल नेपाली साहित्यमा इन्द्रकुमार श्रेष्ठ सरित् परिचितमात्रै हैन स्थापित र चर्चित पनि छन् । साहित्यका विविध विधाहरु गीत, गजल, कविता, कथा, उपन्यास, संस्मरण लगायतमा कलम चलाउने साहित्यकार
शरद श्रेष्ठ सरकारी सेवामा आफ्नो छवि र खुबी देखाउँदै संसारका विभिन्न भूभाग घुम्न पाएका र त्यहाँको अनुभूति टिप्दै पुस्तक प्रकाशन गर्न भ्याएका भाग्यमानी लेखकका रूपमा रामप्रसाद पन्त परिचित छन्। हालै
“तथाकथित”का सस्ता बिल्ला
मोहन दुवाल थाकथित’ हुँ म उनीहरूको आँखामा, त्यस्तै मेरो आँखामा उनीहरू ‘तथाकथित’ हुन्। केही गर्नेहरूले केही नगर्नेहरूलाई ‘तथाकथित’ देख्छन्। केही नगर्नेहरूले केही गर्नेहरूलाई पनि ‘तथाकथित’ भन्दा रहेछन्। पार्टीका कार्यकर्ताहरूदेखि पार्टीमा
सिर्जनाका विम्ब–विम्बमा गिरी
मोहन दुवाल, सुर्खेतमा वि.सं. २००९ असार ८ गते जन्म पाएका जीवेन्द्रदेव गिरी १५ वर्षको हुँदादेखि शिक्षण सेवामा जुटेका हुन्। २०२४ सालदेखि २०२८ सालसम्म करिब ७ वर्ष यिनले विद्यालयहरूमा प्रधानाध्यापक भई
कथाको अनावरण गर्दै सापकोटा
शरद श्रेष्ठ काभ्रेपलाञ्चोक, रयालेका विजय सापकोटा जहाँ पुगे पनि साहित्य लेख्न, पढ्न र साहित्यकारहरूमा पुग्न रमाइरहने साहित्यकार हुन्। काभ्रेमा छँदा पनि यिनले साहित्यिक उत्सर्गताका लागि आफूलाई उभ्याए मात्र होइन ‘काभ्रेली